"အမှတျတရတှကေို ရမှေေးလိုမြိုးပုလငျးလေးထဲ ထညျ့သိမျးထားလို့ရတာမြိုးဆိုသိပျကောငျးမယျ။ အဲ့ဒါဆို မပြောကျပွယျ မလှငျ့ပွယျတော့ဘူးလေ။ လိုခငျြတဲ့အခြိနျ ပုလငျးလေးဖှငျ့ပွီး အဲ့အမှတျတရတှကေို ပွနျခံစားရုံပဲ"......
ဇနီးဖွဈသူကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတာကွာပွီးနောကျ Monte Carlo ကိုခရီးထှကျလာတဲ့ ဂုဏျသရရှေိအထကျတနျးလှာသူဌေးကွီး Maxim de Winter တဲ့။
သူ့ရဲ့ဆုံးပါးသှားတဲ့အမြိုးသမီးဟာလဲ Rebecca Hildreth ဆိုတဲ့အရမျးလှပတဲ့အမြိုးတဈဦး သူကလဲသူ့အမြိုးသမီးကိုအရမျးခဈြခဲ့တာတဲ့။
ခနျ့ညားခြောမောလှတဲ့ဒီအမြိုးသားကို သူမ,စတှကေ့တညျးကရငျခုနျခဲ့တာတော့အမှနျပါ။ သူမရဲ့အလုပျရှငျကိုအကွောငျးပွုလို့ Maxim နဲ့သူမ,နီးစပျခဲ့ကွတယျ။
ခုမှစတှကွေ့ပမေဲ့ Maxim ဟာ သူမ,အပျေါမှာဂရုစိုကျလှနျးတယျ ကွငျနာလှနျးတယျ။ မိဘတှဆေုံးရှုံးလိုကျရပွီး တဈကောငျကွှကျ သူမြားရဲ့ကူဖျောလောငျဖကျအလုပျလုပျနရေတဲ့ သူမအတှကျကတော့ Maxim ဟာ အရမျးတနျဖိုးကွီးမားလှနျးတယျ။
သခြောတာကတော့ Maxim နဲ့ အတူတူဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ဒီနရေ့ကျလေးတှကေို မဆုံးရှုံးခငျြဘူး။Maxim ကိုမခှဲနိုငျဘူး။ Maxim ကိုခဈြမိနပွေီ။
"မငျးကိုယျနဲ့ Manderley ကိုလိုကျခဲ့မလား ဒါမှမဟုတျ ဒီအဖှားကွီးနဲ့ အမရေိကားကိုပွနျလိုကျသှားမှာလား" တဲ့ Maxim နောကျနတေယျလို့သူမ,ထငျခဲ့တာ။ အဖွဈအပကျြတှဟောအိပျမကျလိုပဲ မွနျဆနျလှနျးတယျ။ အဲ့မွို့လေးမှာပဲ နှဈယောကျသားလကျထပျခဲ့တယျ။
ကွီးကယျြခမျးနားပွီး romantic ဆနျတဲ့လကျထပျပှဲမဟုတျ လကျမှတျထိုး အကဉျြးခြုံးပွီးအမွနျလကျထပျခဲ့ပမေဲ့ သူမ,ပြျောတယျ။ ကိုယျခဈြရတဲ့သူ သူနဲ့အတူရှိရဖို့၊ သူနဲ့အတူဘဝကိုဖွတျသနျးဖို့ အရာအားလုံးကိုကြောခိုငျးပွီး Maxim နောကျကိုသူမ,လိုကျခဲ့တယျ။
သာမနျလူတနျးစား ရိုးရိုးအေးအေးမိနျးကလေးဘဝကနေ ခုတော့ Mrs. de Winter ဖွဈခဲ့ပွီ။ အရာအားလုံးကိုရငျဆိုငျမယျဆုံးဖွတျထားပမေဲ့ သူမလိုသာမနျမိနျးကလေးတဈယောကျဟာ ဒီအသိုငျးအဝိုငျးကွီးမှာ ဝငျဆနျ့နိုငျပါ့မလား?
နာမညျသာကွားဖူးရုံ ဓာတျပုံထဲသာမွငျဖူးရုံရှိတဲ့ ဒီကွီးကယျြခမျးနားလှတဲ့ Manderley စံအိမျကွီးရဲ့ အိမျကွီးရှငျမအဖွဈနနေိုငျပါ့မလားဆိုတဲ့အတှေးတှကေ သူမ,ကိုအစကတညျးကထိတျလနျ့စနှေငျ့နပွေီ။
အိမျကွီးကိုပဲရောကျရောကျခငျြး မြားပွားလှတဲ့ဝနျထမျးတှနေဲ့ အိမျတျောထိနျးကွီး Mrs. Danvers ရဲ့စူးရှခကျထနျတဲ့ အကွညျ့တှကေသူမရဲ့အကွောကျတရားကို ပိုလို့သာတိုးပှားစခေဲ့တယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီအိမျကွီးမှာ Maxim ရဲ့ဇနီးဟောငျး Rebecca ရဲ့ အငှအေ့သကျတှကေ လှမျးမိုးထားနိုငျနတေုနျးပဲ။
အဆိုးရှားဆုံးကတော့ အိမျတျောထိနျးကွီး Mrs. Danvers ရဲ့ သူ့ကို Rebacca နဲ့လိုကျနှိုငျးယှဉျပွီး အရငျ Mrs. de Winter(Rebecca) တုနျးကတော့ဘယျကိစ်စတှကေိုဘယျလိုစီစဉျခဲ့တာ၊ breakfast မှာတာကအစ ဘယျလို စနဈကတြာ၊ သူကဘယျလိုတှလှေခဲ့တာ၊ Maxim က Rebecca ကိုဘယျလိုခဈြခဲ့တာ စတာတှေ၊ တခွားလူတှရေဲ့ပါးစပျဖြားမှာလဲ ခုခြိနျထိ Rebecca ဆိုတာရှိနတေုနျး။
တဈနတေ့ော့ Maxim ရဲ့ အခငျရဆုံးသူငယျခငျြးလဲဖွဈ Estate Manager တဈဦးလဲဖွဈတဲ့ Frank ကိုသူမ,မေးဖွဈတယျ Rebecca ဟာ ဘယျလိုမိနျးကလေးမြိုးလဲလို့ဆိုပွီး။ Frank ရဲ့အဖွကေတော့တဈခှနျးတညျးပဲ။ Rebecca ဟာ သူတှဖေူ့းသမြှမိနျးမတှထေဲအလှဆုံးပဲတဲ့.......
စဉျးစားကွညျ့ဖူးလား? ခံစားကွညျ့ဖူးလား? သူမ,လိုမြိုး ကိုယျခဈြရတဲ့လူရဲ့အရငျလူ ဒါမဟုတျ သူသိပျခဈြခဲ့ရတဲ့လူနဲ့နှိုငျးယှဉျခံရတဲ့ခံစားခကျြမြိုး၊ အထူးသဖွငျ့ အဲ့ဒီလူဟာ ကိုယျ့ထကျ အစစအရာရာသာလှနျနတေဲ့အခါ၊ ပွီးတော့အဲ့လိုလိုကျနှိုငျးယှဉျနမေိတာကလဲ ကိုယျကိုယျတိုငျပါ ဖွဈလာတဲ့အခါ၊ ခံပွငျးပွီးဒေါသထှကျဖို့ကောငျးလှနျးတယျ။
သူမ,အပျေါကွီးစိုးလာတဲ့ဒီဝမျးနညျးသိမျငယျမှုကွောငျ့ပဲ ဒီကှာခွားလှနျးတဲ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမှာဝငျဆနျ့ဖို့ သူမရဲ့အခဈြရူးရူးစှာကွိုးစားမှုတှကေ ထငျသလိုဖွဈမလာတဲ့အခါ Maxim နဲ့သူမ,ကွား ပြျောရှငျမှုလေးတှကေပါ မှေးမှိနျစပွုလာတယျ။
ဒါဖွငျ့ Maxim ကရောသူမကိုတဈကယျခဈြတာဟုတျရဲ့လား။ Rebecca ကိုမမနေို့ငျသေးလို့ Rebecca နရောအစားထိုးစိတျဖွရေုံသကျသကျလကျထပျခဲ့တာလား။ Maxim ရဲ့အခဈြတဈခုတညျးကွောငျ့ပဲသူမဒီအထိလိုကျလာခဲ့တာ။ Maxim ကသာသူ့ကိုမခဈြတော့ရငျသူမ,ဟာ ဒီအိမျကွီးထဲရှငျရကျနဲ့သလေူတဈယောကျ။
ဒါပမေဲ့ တဈရကျမှာတော့ Rebecca သဆေုံးခဲ့ရခွငျးနဲ့ပကျသကျတဲ့ကိစ်စတဈခုပျေါလာပွီး Maxim ဟာလဲ သူ့ရဲ့ခံစားခကျြတှေ သူမ,ကိုဖှငျ့ခပြွီးနောကျမှာတော့....
ဇာတျလမျးဟာလဲ အဲ့ဒီကစပွီး ဦးတညျခကျြပွောငျးသှားခဲ့တယျ။ Tennis ကစားသမားမြား ဘောလုံးကိုလပေျေါမွှောကျပွီးမှရိုကျလိုကျသလိုပဲ ဇာတျလမျးဟာလဲအရှေ့ ပထမပိုငျး နဲ့ ဒုတိယပိုငျး မှာတောကျလြောကျတငျလာခဲ့တဲ့ intensity ကို တတိယပိုငျး အကူးမှာ direction လှဲပဈလိုကျတဲ့ ဒီ လှညျ့ကှကျ ကွီးဟာပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈလောကျအောငျကိုကောငျးလှနျးတယျ။
ဒီနရောဟာ ဇာတျလမျးရဲ့အဓိက လှညျ့ကှကျ ဖွဈသလို ဇာတျလမျးရဲ့တကယျ့အနှဈသာရလို့လဲပွောလို့ရတယျ။ နှဈတှကွောပွီဆိုပမေဲ့ မဖတျရသေးတဲ့သူအတှကျကတော့အသဈပါပဲ။
ဝတ်ထုတဈခုလုံးမှာ ထိုအမြိုးသမီးလေးရဲ့ နာမညျကို ထညျ့သှငျးရေးသားတာ မတှရေ့ဘူး "သူမ" လို့ပဲတောကျလြောကျသုံးခဲ့တာ။ ထိုဝတ်ထုက ရုပျရှငျရှိတယျ ရုပျရှငျထဲမှာလဲ သူမကို darling, my wife, Mrs. de Winter စတဲ့အသုံးအနှုနျးတှနေဲ့ပဲချေါခဲ့ပွီး သူမကို နာမညျတပျချေါတာမြိုးမရှိခဲ့ဘူး။
Rebecca ဝတ်ထုက ၁၉၃၈ မှာ ထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ရုပျရှငျကတော့ 1940 ကထှကျရှိခဲ့တာပါ အင်ျဂလိပျ Director ကွီး Sir Alfred Hitchcock ရဲ့ Hollywood ပှဲဦးထှကျလကျရာပါ။ Sir Alfred ဆိုတာကလဲ ရုပျရှငျသမိုငျးကွောငျးမှာ အထငျကရအရှိဆုံး Legendary Directors တှထေဲကတဈဦးပါ။
သူရဲ့ Psycho, Vertigo စတဲ့ရုံရှငျတှကေလဲ ယခုခြိနျထိစံနမူနာထားရတဲ့ masterpiece တှပေါပဲ။ သူ့အကွောငျးကတော့နောကျထပျ post တဈခုထပျရေးပွီးပွောမှလုံလောကျပါလိမျ့မယျ။ Daphne du Maurier ရဲ့ ဝတ်ထုကိုရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီ Rebecca ရုပျရှငျဟာလဲ သူ့ရဲ့ master piece တှထေဲကတဈခုပါ။
ရုပျရှငျရဲ့ အဓိကဆှဲဆောငျနိုငျမှုအရှိဆုံးကတော့ ဇာတျလမျးနဲ့ သရုပျဆောငျတှပေါပဲ။ Romance နဲ့ Psychological Triller ကိုပေါငျးထားတဲ့ဒီဇာတျလမျးဟာ အစပိုငျးမှာ သာမနျရိုးရိုးဇာတျလမျးတဈခုလို့ထငျရစရာရှိပမေဲ့ မထငျမှတျထားတဲ့ plot twist လေးနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့လူရဲ့စိတျထဲ မေးခှနျးလေးတှမေသိမသာတှေးမိလာစပွေီး ဇာတျလမျးကိုစလယျဆုံး စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျအောငျ ဆှဲဆောငျထားနိုငျခဲ့တယျ။
လူဇာတျကောငျမပါ၊ ဓာတျပုံတောငျမပါတဲ့ Rebecca ဆိုတဲ့ ဒီနာမညျဟာ ဝတ်ထုထဲကလူတှကေိုရော၊ ဖတျနတေဲ့ပရိတျသတျတှကေိုပါလှမျးမိုးထားနိုငျခဲ့တယျ။
ပွောရရငျ Rebecca ဟာ လှပတဲ့ romance တဈခု၊ တစ်ဆမေပါတဲ့ သရဲဝတ်ထုတဈခု၊ တဈဦးနဲ့တဈဦးလြှို့ဝှကျခကျြကငျးစှာ နားလညျမှုနဲ့ယုံကွညျမှုကပဲ ပြျောရှငျမှုကိုသယျဆောငျပေးနိုငျသလို ကိုယျ့ရဲ့အတှေးတှေ၊ တဈခါတလေ အတိတျကနရေုနျးမထှကျနိုငျတဲ့ကိုယျ့ရဲ့စိတျတှကေပဲ ကိုယျ့ကို ခွောကျလှနျ့နတေဲ့ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးတစ်ဆတှေဆေိုတာမြိုးကို ပွသှားခဲ့တယျ။
ရေဗက္ကာ ၀တ္ထု ကောက်နုတ်သုံးသပ်ချက်
"အမှတ်တရတွေကို ရေမွှေးလိုမျိုးပုလင်းလေးထဲ ထည့်သိမ်းထားလို့ရတာမျိုးဆိုသိပ်ကောင်းမယ်။ အဲ့ဒါဆို မပျောက်ပြယ် မလွင့်ပြယ်တော့ဘူးလေ။ လိုချင်တဲ့အချိန် ပုလင်းလေးဖွင့်ပြီး အဲ့အမှတ်တရတွေကို ပြန်ခံစားရုံပဲ"......
ဇနီးဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကြာပြီးနောက် Monte Carlo ကိုခရီးထွက်လာတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိအထက်တန်းလွှာသူဌေးကြီး Maxim de Winter တဲ့။
သူ့ရဲ့ဆုံးပါးသွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာလဲ Rebecca Hildreth ဆိုတဲ့အရမ်းလှပတဲ့အမျိုးတစ်ဦး သူကလဲသူ့အမျိုးသမီးကိုအရမ်းချစ်ခဲ့တာတဲ့။
ခန့်ညားချောမောလှတဲ့ဒီအမျိုးသားကို သူမ,စတွေ့ကတည်းကရင်ခုန်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါ။ သူမရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုအကြောင်းပြုလို့ Maxim နဲ့သူမ,နီးစပ်ခဲ့ကြတယ်။
ခုမှစတွေ့ကြပေမဲ့ Maxim ဟာ သူမ,အပေါ်မှာဂရုစိုက်လွန်းတယ် ကြင်နာလွန်းတယ်။ မိဘတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး တစ်ကောင်ကြွက် သူများရဲ့ကူဖော်လောင်ဖက်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ သူမအတွက်ကတော့ Maxim ဟာ အရမ်းတန်ဖိုးကြီးမားလွန်းတယ်။
သေချာတာကတော့ Maxim နဲ့ အတူတူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဒီနေ့ရက်လေးတွေကို မဆုံးရှုံးချင်ဘူး။Maxim ကိုမခွဲနိုင်ဘူး။ Maxim ကိုချစ်မိနေပြီ။
"မင်းကိုယ်နဲ့ Manderley ကိုလိုက်ခဲ့မလား ဒါမှမဟုတ် ဒီအဖွားကြီးနဲ့ အမေရိကားကိုပြန်လိုက်သွားမှာလား" တဲ့ Maxim နောက်နေတယ်လို့သူမ,ထင်ခဲ့တာ။ အဖြစ်အပျက်တွေဟာအိပ်မက်လိုပဲ မြန်ဆန်လွန်းတယ်။ အဲ့မြို့လေးမှာပဲ နှစ်ယောက်သားလက်ထပ်ခဲ့တယ်။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး romantic ဆန်တဲ့လက်ထပ်ပွဲမဟုတ် လက်မှတ်ထိုး အကျဉ်းချုံးပြီးအမြန်လက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့ သူမ,ပျော်တယ်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ သူနဲ့အတူရှိရဖို့၊ သူနဲ့အတူဘဝကိုဖြတ်သန်းဖို့ အရာအားလုံးကိုကျောခိုင်းပြီး Maxim နောက်ကိုသူမ,လိုက်ခဲ့တယ်။
သာမန်လူတန်းစား ရိုးရိုးအေးအေးမိန်းကလေးဘဝကနေ ခုတော့ Mrs. de Winter ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ အရာအားလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ သူမလိုသာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကြီးမှာ ဝင်ဆန့်နိုင်ပါ့မလား?
နာမည်သာကြားဖူးရုံ ဓာတ်ပုံထဲသာမြင်ဖူးရုံရှိတဲ့ ဒီကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ Manderley စံအိမ်ကြီးရဲ့ အိမ်ကြီးရှင်မအဖြစ်နေနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့အတွေးတွေက သူမ,ကိုအစကတည်းကထိတ်လန့်စေနှင့်နေပြီ။
အိမ်ကြီးကိုပဲရောက်ရောက်ချင်း များပြားလှတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အိမ်တော်ထိန်းကြီး Mrs. Danvers ရဲ့စူးရှခက်ထန်တဲ့ အကြည့်တွေကသူမရဲ့အကြောက်တရားကို ပိုလို့သာတိုးပွားစေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီအိမ်ကြီးမှာ Maxim ရဲ့ဇနီးဟောင်း Rebecca ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေက လွှမ်းမိုးထားနိုင်နေတုန်းပဲ။
အဆိုးရွားဆုံးကတော့ အိမ်တော်ထိန်းကြီး Mrs. Danvers ရဲ့ သူ့ကို Rebacca နဲ့လိုက်နှိုင်းယှဉ်ပြီး အရင် Mrs. de Winter(Rebecca) တုန်းကတော့ဘယ်ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ခဲ့တာ၊ breakfast မှာတာကအစ ဘယ်လို စနစ်ကျတာ၊ သူကဘယ်လိုတွေလှခဲ့တာ၊ Maxim က Rebecca ကိုဘယ်လိုချစ်ခဲ့တာ စတာတွေ၊ တခြားလူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာလဲ ခုချိန်ထိ Rebecca ဆိုတာရှိနေတုန်း။
တစ်နေ့တော့ Maxim ရဲ့ အခင်ရဆုံးသူငယ်ချင်းလဲဖြစ် Estate Manager တစ်ဦးလဲဖြစ်တဲ့ Frank ကိုသူမ,မေးဖြစ်တယ် Rebecca ဟာ ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲလို့ဆိုပြီး။ Frank ရဲ့အဖြေကတော့တစ်ခွန်းတည်းပဲ။ Rebecca ဟာ သူတွေ့ဖူးသမျှမိန်းမတွေထဲအလှဆုံးပဲတဲ့.......
စဉ်းစားကြည့်ဖူးလား? ခံစားကြည့်ဖူးလား? သူမ,လိုမျိုး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူရဲ့အရင်လူ ဒါမဟုတ် သူသိပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့လူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခံရတဲ့ခံစားချက်မျိုး၊ အထူးသဖြင့် အဲ့ဒီလူဟာ ကိုယ့်ထက် အစစအရာရာသာလွန်နေတဲ့အခါ၊ ပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်နှိုင်းယှဉ်နေမိတာကလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါ ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ခံပြင်းပြီးဒေါသထွက်ဖို့ကောင်းလွန်းတယ်။
သူမ,အပေါ်ကြီးစိုးလာတဲ့ဒီဝမ်းနည်းသိမ်ငယ်မှုကြောင့်ပဲ ဒီကွာခြားလွန်းတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာဝင်ဆန့်ဖို့ သူမရဲ့အချစ်ရူးရူးစွာကြိုးစားမှုတွေက ထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါ Maxim နဲ့သူမ,ကြား ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကပါ မှေးမှိန်စပြုလာတယ်။
ဒါဖြင့် Maxim ကရောသူမကိုတစ်ကယ်ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ Rebecca ကိုမမေ့နိုင်သေးလို့ Rebecca နေရာအစားထိုးစိတ်ဖြေရုံသက်သက်လက်ထပ်ခဲ့တာလား။ Maxim ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲသူမဒီအထိလိုက်လာခဲ့တာ။ Maxim ကသာသူ့ကိုမချစ်တော့ရင်သူမ,ဟာ ဒီအိမ်ကြီးထဲရှင်ရက်နဲ့သေလူတစ်ယောက်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ Rebecca သေဆုံးခဲ့ရခြင်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာပြီး Maxim ဟာလဲ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေ သူမ,ကိုဖွင့်ချပြီးနောက်မှာတော့....
ဇာတ်လမ်းဟာလဲ အဲ့ဒီကစပြီး ဦးတည်ချက်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ Tennis ကစားသမားများ ဘောလုံးကိုလေပေါ်မြှောက်ပြီးမှရိုက်လိုက်သလိုပဲ ဇာတ်လမ်းဟာလဲအရှေ့ ပထမပိုင်း နဲ့ ဒုတိယပိုင်း မှာတောက်လျောက်တင်လာခဲ့တဲ့ intensity ကို တတိယပိုင်း အကူးမှာ direction လွှဲပစ်လိုက်တဲ့ ဒီ လှည့်ကွက် ကြီးဟာပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်လောက်အောင်ကိုကောင်းလွန်းတယ်။
ဒီနေရာဟာ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိက လှည့်ကွက် ဖြစ်သလို ဇာတ်လမ်းရဲ့တကယ့်အနှစ်သာရလို့လဲပြောလို့ရတယ်။ နှစ်တွေကြာပြီဆိုပေမဲ့ မဖတ်ရသေးတဲ့သူအတွက်ကတော့အသစ်ပါပဲ။
ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးမှာ ထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့ နာမည်ကို ထည့်သွင်းရေးသားတာ မတွေ့ရဘူး "သူမ" လို့ပဲတောက်လျောက်သုံးခဲ့တာ။ ထိုဝတ္ထုက ရုပ်ရှင်ရှိတယ် ရုပ်ရှင်ထဲမှာလဲ သူမကို darling, my wife, Mrs. de Winter စတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပဲခေါ်ခဲ့ပြီး သူမကို နာမည်တပ်ခေါ်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။
Rebecca ဝတ္ထုက ၁၉၃၈ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကတော့ 1940 ကထွက်ရှိခဲ့တာပါ အင်္ဂလိပ် Director ကြီး Sir Alfred Hitchcock ရဲ့ Hollywood ပွဲဦးထွက်လက်ရာပါ။ Sir Alfred ဆိုတာကလဲ ရုပ်ရှင်သမိုင်းကြောင်းမှာ အထင်ကရအရှိဆုံး Legendary Directors တွေထဲကတစ်ဦးပါ။
သူရဲ့ Psycho, Vertigo စတဲ့ရုံရှင်တွေကလဲ ယခုချိန်ထိစံနမူနာထားရတဲ့ masterpiece တွေပါပဲ။ သူ့အကြောင်းကတော့နောက်ထပ် post တစ်ခုထပ်ရေးပြီးပြောမှလုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။ Daphne du Maurier ရဲ့ ဝတ္ထုကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီ Rebecca ရုပ်ရှင်ဟာလဲ သူ့ရဲ့ master piece တွေထဲကတစ်ခုပါ။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိကဆွဲဆောင်နိုင်မှုအရှိဆုံးကတော့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေပါပဲ။ Romance နဲ့ Psychological Triller ကိုပေါင်းထားတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းဟာ အစပိုင်းမှာ သာမန်ရိုးရိုးဇာတ်လမ်းတစ်ခုလို့ထင်ရစရာရှိပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ plot twist လေးနဲ့ ကြည့်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲ မေးခွန်းလေးတွေမသိမသာတွေးမိလာစေပြီး ဇာတ်လမ်းကိုစလယ်ဆုံး စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။
လူဇာတ်ကောင်မပါ၊ ဓာတ်ပုံတောင်မပါတဲ့ Rebecca ဆိုတဲ့ ဒီနာမည်ဟာ ဝတ္ထုထဲကလူတွေကိုရော၊ ဖတ်နေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုပါလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့တယ်။
ပြောရရင် Rebecca ဟာ လှပတဲ့ romance တစ်ခု၊ တစ္ဆေမပါတဲ့ သရဲဝတ္ထုတစ်ခု၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလျှို့ဝှက်ချက်ကင်းစွာ နားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကပဲ ပျော်ရွှင်မှုကိုသယ်ဆောင်ပေးနိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေ၊ တစ်ခါတလေ အတိတ်ကနေရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကပဲ ကိုယ့်ကို ခြောက်လှန့်နေတဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတစ္ဆေတွေဆိုတာမျိုးကို ပြသွားခဲ့တယ်။